Tsy kianja sy Antenimiera hanehoan-kevitra : mampidina an-dalambe ny mpanohitra ny toe-draharaha | NewsMada
Tsy kianja sy Antenimiera hanehoan-kevitra : mampidina an-dalambe ny mpanohitra ny toe-draharaha
Hatramin’izao, tsy mipetraka amin’ny toerany ny mpanohitra eo amin’ny sehatra politika eto Madagasikara. Tsy mahavita ny asany? Na ry zareo mpanohitra io, na ny eo anivon’ny fitondram-panjakana tomponandraikitra amin’izany…
Mbola banga, ohatra, ny toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena, na efa roa taona mahery aza no nijoroan’io andrimpanjakana io. Toy izany koa ny eny anivon’ny Antenimierandoholona, vao niorina ny volana febroary lasa teo.
Aiza ny lesoka na inona ny olana? Misy milaza fa tsy mbola mivoaka ny didim-panjakana fampiharana ny sata mifehy ny fanoherana, ifampiandrasana… Ny hafa milaza fa anjaran’ny minisiteran’ny Atitany ny mamoaka ny anaran’ny antoko mpanohitra.
Mifidy izay ho lehibeny ny mpanohitra amin’izany, ary mpandray ny toeran’ny filoha lefitra fahafito eny anivon’ny Antenimierampirenena. Raha tsy mifanaraka ny samy mpanohitra, mandray ny toerana izay be vato tamin’ny fifidianana depiote.
Hafa ny eny amin’ny Antenimierandoholona, tsy olona avy ety ivelany no haka ny toeran’ny mpanohitra, fa ny samy mpanohitra eo anivon’io andrimpanjakana io no mifampifidy. Mbola banga koa izay toerana izay izao…
Tsy misy ny mpanohitra ara-dalàna
Hatreto, tsy misy aloha izay lazaina ho mpanohitra “ara-dalàna” na “ao anaty rafi-panjakana” eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Aiza àry no hahazoan’ny mpanohitra maneho hevitra amin’izany? Nefa maro ny mampiaka-peo etsy sy eroa ny amin’ny tsy fetezan-javatra amin’ny raharaham-pirenena, indrindra ny amin’ny fiainam-bahoaka.
Noho ny zava-nitranga teny Andrainarivo, ny 29 marsa lasa teo: naaton’ny eo anivon’ny prefektioran’Antananarivo Renivohitra tanteraka ny fanomezana fahazoan-dalana manao hetsika sy famoriam-bahoaka politika, raha ny eto amin’ny Renivohitr’i Madagasikara. Mbola resaka sy raharaha hafa ny any amin’ny faritra sy faritany…
Aiza àry no hahazoan’ny olona maneho hevitra, indrindra ny mpanohitra izay hoe manana ny sata ho azy? Eo ny mampanahy ny sasany: manosika ny mpanohitra hidina an-dalana ny raharaha?